Home Wararka Galmudug oo shaacisay qabashada doorashada 21 Kursi
Galmudug oo shaacisay qabashada doorashada 21 Kursi
Guddiga doorashooyinka Maamulka Galmudug ayaa shaaciyay 21 kursi ee taalay Dhuusomareeb.
tirada guud ayaa ahayd 26 kursi balse horey ayaa loo qabtay afar kursi.
Magaalada Galkacayo waxaa taalo iyana 11 Kursi oo aan wali la shaacin.
Previous articleGabar Soomaali ah oo loo diiday in ay ka dagto garoon diyaaradeed.
Next articleHirshabelle oo shaacisay qabashada doorashada 11 Kursi
Safiirka Qatar ee Somaaliya oo gaaray Kismaayo